မြို့ရိုးကိုရေစိုခံတာ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -wallpro.com.tw
ရေပေါက်ကြား! သင့်ရဲ့မြို့ရိုးပေါ်မှာတာရှည်ရေအမှတ်အသားရှိပါသလား? သို့မဟုတ်မျက်နှာကျက်မှိုနှင့်ပေါက်ကြားအနက်ရောင်ပါသလဲ ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပါသည် မြို့ရိုးကိုရေစိုခံတာ ထိရောက်မှုနှင့်ချွတ်ကွာဆေးအလွန် "ချွတ်ဆေးသုတ်" ပါသလဲ? အဓိကအားနည်းချက်၏အများဆုံးဖြစ်ပါသည် Taiwan'' s ကိုဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများအဘယ်သူမျှမပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရေရှည်တည်ဆောက်ဖို့ရေစိုခံစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းရှိသည်, ဥရောပ, အမေရိကန်နှင့်ဂျပန်အဆင့်မြင့်အမျိုးသားရေးအပြင်မြို့ရိုးကိုဆောက်လုပ်ရေးနည်းစနစ်များလေ့လာခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ အဆိုပါအပြင်ပန်း မြို့ရိုးကိုရေစိုခံတာ အဘယ်သူမျှမရေရှည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စုံလင်သောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းရှိပါတယ်။ ဆောက်သောသူသည်မြို့ရိုးရေစိုခံတာကောင်းတစ်ခုအလုပ်လုပ်နေရင်တောင်ကြောင့်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဖြစ်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အတိတ်နှစျတှငျ, အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုအုပ်ကြွပ်အဘို့အမမှန်ကန်ကြောင်းဆောက်လုပ်ရေးနည်းစနစ်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်, အပြည့်အဝ tile ကိုမိုဃ်းရွာစေမှုကိုအသုံးပြုခဲ့ကြ ရေစိုခံအလွှာဟာ။ အပြင်မြို့ရိုးအများ၏အသက်, 10 နှစ်ကျော်တချို့အပြင်ဘက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မည်။ သောကြောင့်အတွက်ပူနှင့်စိုစွတ်သောရာသီဥတုနှင့်အတူဒွန်တွဲသည့်လုပ်ငန်းခွင်များမှားဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်း၏ Taiwanအဆိုပါမိုးရာသီရာသီဥတု, ငလျင်, အချည်းနှီးသောနှင့်ညစ်ပတ်ပေရေမိုဃ်းကိုရွာစေခြင်း, မြို့ရိုးကိုရေစိုခံတာ အကျိုးသက်ရောက်မှု5နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်း, အိမ်သူအိမ်သားပုံသှငျးနှင့်ပေါက်ကြားစေတစ်ယောက်တည်းဘိလပ်မြေသဲစတင်ခဲ့သည်။ ရေစိုခံအဘယ်အရာ function ကို, ထိုဘိလပ်မြေသဲမှာအားလုံးရေစိုခံမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ဥရောပ, အမေရိကနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံများတွင်အဆင့်မြင့်နိုင်ငံများကအပေါငျးတို့သပြင်ပနံရံများဆေးသုတ်ကိုသုံးခြင်းနှင့်အိမ်သာသည့်အုပ်ကြွပ်ကပ်ပါလိမ့်မယ်။ အများစုကထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူပြင်မြို့ရိုးပေါ်မှာအုပ်ကြွပ်ထားကြပြီ။ ငါကလူတိုင်းကိုမေးချင်ပါတယ်။ ဥရောပ, အမေရိကန်, ဂျပန်ဆောက်လုပ်ရေးကုန်သည်များထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီများသည်ထက်မိုက်မဲဖြစ်ပါသလား ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရောင်းချခဲ့ထိပ်တန်းသုံးနိပွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗိသုကာကုတ်အင်္ကျီအရ, အပြင်ပန်းမြို့ရိုးအရောင်စုံဆေးသုတ်၏ရေစိုခံဘဝနေ့စဉ် SOP နှင့်ညီသည်ကို၎င်း, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေး, အစာရှောင်ခြင်းအဆင်းလှ, အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လွယ်ကူပါတယ်, shockproof နှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပုံပျက်, သင် ChengLin ဆန်းသစ်တီထွင်မှု Consulting နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်, သငျသညျအဘယျကွောငျ့နိပွန်သိစေ မြို့ရိုးကိုရေစိုခံတာ ကုတ်အင်္ကျီကိုကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းသုံးမရောင်းနိုင်။
အခါအိမ်ကယိုစိမ့်အတွက်မြို့ရိုး, ရှိန်ပြင်းထန်တဲ့နေ့တွေမှာဖြစ်ကြောင်း "မြို့ရိုးကိုကင်ဆာ" ကျိုးနှင့်အလွှာကဲ့သို့၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုအလွန်အသွင်အပြင်ထိခိုက်ပေမယ့်ပင်မိသားစုများ၏ကျန်းမာရေးထိခိုက်နေကြသည်သာ! က Wall ကင်ဆာဓာတ်မတည်ဖြစ်ပေါ်စေအလွယ်တကူကလေးများနှင့်သားသမီးများ၏အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထိခိုက်ဒဏ်ငွေဖုန်မှုန့် (ဘိလပ်မြေပြိုကွဲ), ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဆဲစွန်းရိုးကို scrubbing နှင့် staining ၏ပြဿနာကိုစိုးရိမ်? သငျသညျမပျော်အောင်ဤမြစ်များဆုံးရှုံးထံမှလာ
။ ရေစိုခံအရေးပေါ်တာဝန်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ယိုစိမ့်ရဲ့အရင်းအမြစ်ကနေမြို့ရိုးကိုကင်ဆာများ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပေသည်။